Iimpawu ezilula ezivela kwi-Semalt Ukuphucula i-Site yakho yamatriki
Kukho iitoni ezifundisayo apho zifuna ukukunceda uqonde inkqubo yokudala i-akhawunti ye-Google Analytics kunye nokunye okuninzi. Ngokuqinisekileyo, akukubi ukukwazi ukuseta indlela yokuhlalutya kwiwebhusayithi yakho. Ingongoma, unokongeza iskripthi kodwa ungaphumeleli ukufumana inzuzo ngokupheleleyo - explore south america tours. Funda ukufunda ukuze ufunde indlela onokuphucula ngayo i-metrics yamanqaku akho.
Ezi ngcebiso ezinikezwa ngu-Artem Abgarian, uMphathi oyiNtloko kuMphathi weMatriki we-10 (Semalt , uya kunceda ekuphuculeni ukuchaneka kwedatha yakho kunye nokuvelisa iingxelo eziza kukushiya.
Ukuzibandakanya ngokwakho - Uhlala ujonga iwebhusayithi yakho kangangoko? Ngaba uyazi ukuba ungabandakanyi i-traffic ukusuka kwiidilesi ezithile ze-IP? Oku kuphucula ukuchaneka kweetriki zamanqaku akho.
Uphando lwangaphakathi - Ngokufaka le fayile kwiwebhusayithi yakho ungachaza ukuba yeyiphi iikokisi okanye amagama asetshenzisiweyo abasebenzisa ukuza kuwe. Ngaba akunjalo pholile, kunene? ​​
Ukudluliselwa koMoya - Ngaba wakha waphawula iqela lezinto ezingenanto, ezingaqhelekanga kwiindawo ezibonisa ingxelo yakho yokuthumela? Bongeza idatha kwiprofayile yakho kwithemba owenza ishishini nabo.
Yenza iindwendwe - Ungasebenzisa ubunjineli obungasemva ukudala isigaba seendwendwe esiye saba ngabaxumi. Ngale ndlela unokubeka iliso ukusebenza kwendawo yakho kwisithuba.
Iinjongo - Yintoni onokuyithanda ukuba iindwendwe zenze xa zifika kwiwebhusayithi yakho? Ngaba benza oko kanye? I-Google Analytics izokukunceda ukuba ulinganise oku.
Ukungahambisani nesithuthi sakho kwi-Google Analytics
Ukuze ugweme ukufumana iinkcukacha ezithintekayo, faka i-intanethi ye-intanethi ukusuka kwidilesi yakho ye-IP..Ungavumeli ukuba i-traffic yangaphakathi ikhuphe idatha yakho. Nantsi indlela:
Yiya kwi-akhawunti yakho ye-Google analytics kwaye ungene ngemvume
Yiya kwithebhu 'Admin' uze ukhethe i-akhawunti elandelwe yipropati enenjongo yokongeza isihlunu.
Chofoza + Uhlu lwefayile uze uqhubeke njengoko uceliwe.
Khangela idilesi yakho ye-IP usebenzisa iisevisi ezinjenge- "yintoni i-IP yami" uze uyibeke kwindawo ethile.
Emva kokungeza idilesi ye-IP kwisihlunu, gcina utshintsho kwaye usebenzise ifayile. Ngoku ulungile ukuhamba.
Ukunika ukukhangela kwangaphakathi
Yiya kwi-akhawunti yakho ye-Google analytics kwaye ungene ngemvume.
Yiya kulawulo, vula i-akhawunti, ipropati kunye nombono onqwenela ukuwenza uphendlo lwewebhusayithi.
Khetha 'izicwangciso zokujonga,' kunye naphaya kwezantsi kwepaneli oza kubona i-Site-Search-Izicwangciso
Nika amandla inketho yokulandelela isayithi
Faka iparameter yombuzo ('s' kwiwebhusayithi yeWePress) uze ulondoloze.
Ukwahlula ukuthunyelwa kwezinto eziphambili
Ngena kwi-akhawunti yakho ye-Google analytics
Yiya kuyo nayiphi na iphepha lokubika, kwaye uza kubona + ukhetho lwentetho. Khetha kwaye wongeze isigaba esitsha
Nika igama kwicandelo kwaye nqakraza kwiimeko
Hlela iFayile >> IiseshoniSessions >> Ukungabandakanyi kunye noMthombo >> ulinganisa i-regex
Yongeza zonke iipoleni ofuna ukuzenza ngaphandle kokuhlukana ngamnye kunye isimboli.
Ukubeka esweni ukuhamba kwendlela
Hlela iFayile >> Iiseshoni >> Faka kunye neSessionDuration> 60 okanye enye i-UniqueScreenViews >> I-PerSession >> 1
Ungaguqula inani lezikrini okanye ixesha elide kuxhomekeke ekusebenzeni kwezivakashi.
Umsebenzi wokujonga iliso
Ngena kwi-akhawunti ye-Google analytics
Yiya kulawulo, iAkhawunti, ipropati kunye nembono
iinjongo zonyulo; + Injongo entsha
Gqibezela inkcazo yemeko yeenkcukacha kunye neenkcukacha, kwaye ulungile ukuhamba.